नेपाल आइडलमा बुद्ध लामालाई सर्वाधिक मत, निशान भट्टराई तेस्रो, बाहिरिए सागर - Everest Dainik - News from Nepal
नेपाल आइडलमा बुद्ध लामालाई सर्वाधिक मत, निशान भट्टराई तेस्रो, बाहिरिए सागर
एपी वान टेलिभिजनबाट प्रशारित गायन रियालिटी सो ‘नेपाल आइडल’बाट सागर आले बाहिरिएका छन् । सयौं प्रतिष्पर्धीहरुलाई पछाडि पार्दै टप ४ सम्म आइपुगेका आलेले दर्शकहरुको भोटिङको आधारमा भएको निर्णयपछि ‘नेपाल आइडल’को मञ्च छोड्नु पर्ने भएको हो ।
नेपाल आइडलका लागि प्रतिष्पर्धारत निशान भटराई, प्रताप दास, बुद्ध लामा र सागर आले थिए । यही शुक्रबारबाट सागर आले नेपाल आइडलको मञ्चबाट बाहिरिएका हुन् ।
आलेले यसअघिका प्रतियोगिहरुले झै आफूलाई यस स्थानसम्म ल्याइदिएको नेपाल आइडलको मञ्च, प्रिय दर्शक, गुरुहरु सबैलाई सम्झिए । सागर बाहिरिने निर्णयपछि सागर प्रेमी दर्शकहरुको आँखा रसाएका थिए । आगामी दिनका प्रतिष्पर्धीहरु निशान, प्रताप, बुद्ध पनि रोएका थिए । सागरले नेपाल आइडलको मञ्चमा अन्तिम दिन सुगम पोखरेलको ‘सम्हाल्लिन्छ कैले मन्…’ बोलको गीत गाएर विदा भए ।
नेपालमा सर्वाधिक हेरिएको र चर्चामा रहेको को बन्ला नेपाल आइडलका विषयमा चार प्रतिष्पर्धीमध्ये कसले कति पाए भन्नेबारे भोट दिने र प्रतिष्पर्धीमात्रै होइन सम्पूर्ण नेपालीको चासोको विषय बनेको छ । अन्तिम ४ प्रतिष्पर्धीबाट ३ मा जाने विषयमा नेपाल आइडलको सवैभन्दा विवादित र चर्चामा रह्यो । यसै विषयमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा रिट समेत पर्यो ।
गत हप्ता ३७ लाख २० हजार २ सय ८० मत नेपाल आइडलका प्रतिस्पर्धीवीच ४ जनालाई आयो । यसमा सवैभन्दा वुध्द लामाले प्राप्त गरे भने कम सागर आलेले । यही कारण आले आउट पनि भए ।
याे पनि पढ्नुस प्रथम खोटाङ आइडल बने तेजकुमार
भदौ १६ गते रातीदेखि १७ गते अपरान्ह १२ बजेसम्म एसएमएस र अनलाइनबाट प्राप्त भोटमध्ये लामाले सार्वाधिक अर्थात् ११ लाख ४५ हजार ५३८ मत पाएका हुन् । बुद्धले एसएमएसबाट ६ लाख ९१ हजार ५७ मत पाएका छन् भने अनलाइन भोटिङबाट ४ लाख ५४ हजार ४ सय ८१ मत पाएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस फेसबुक लाइभबाट रविले भने, ‘तपाइँको माया र साथले निकै खुसी छु’ [भिडियो]
दोस्रो स्थानमा रहेका प्रताप दासले ८ लाख ९३ हजार ३ सय ४७ मत पाएका छन् । जसमध्ये ७ लाख १४ हजार ९ सय ९९ मत एसएमएसबाट र १ लाख ७८ हजार ३ सय ४८ मत अनलाइनबाट पाएका छन् ।
तेस्रो नम्बरमा रहेका निशान भटराईले ८ लाख ७१ हजार ४ सय ८० मत पाएका छन् । उनले अनलाइनबाट ३ लाख ७१ हजार १४९ मत पाएका छन् भने एसएमएसबाट ५ लाख ३ सय ३१ मत पाएका छन् ।
चौथो नम्बरमा रहेका सागर आलेले ८ लाख ९ हजार ९ सय १५ भोट पाएका छन् । उनले एसएमएसबाट ४ लाख १९ हजार ८ सय ७५ मत पाएका छन भने अनलाइनबाट ३ लाख ९० हजार ४० मत पाएका छन् ।
उसोतः यसअघिसम्म बजारमा निशान भट्टराई नेपाल आइडल बन्छन् भन्ने हल्ला चलेको थियो प्रस्तुती हेर्दा पनि अन्य प्रतिष्पर्धीको भन्दा निशानको नै उत्कृष्ट देखिन्थ्यो । तर हिजो सार्वजनिक भएको भोटिङ नतिजाबाट निशान तेस्रो स्थानमा पर्न पुगेका छन् । यसले गर्दा नेपाल आइडलको अन्तिममा आएर भोटिङ प्रणालीलाई मात्रै अपनाउनाले वास्तविक प्रतियोगिको क्षमतामाथि कुठाराघात हुन लागेकोसम्म टिकाटिप्पणी गरिरहेका छन् । फेसबुक सामाजिक सञ्जालहरुमा निशान नै नेपला आइडलको विजेता हुनुपर्ने दावी गर्दै आएकाहरु पनि चकित बनेका छन् । बुद्ध लामाको जीतबाट भन्दा पनि निशानको हारबाट नेपाली दर्शकहरु चिन्तित देखिएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस ‘नेपाल आइडल’ रवि ओड सम्मानित
अब प्रतिस्पर्धी बुद्ध, प्रता र निशान भट्टराई मध्ये एकजना नेपाल आइडल हुनेछन् । जसका लागि यो हप्तादेखी अर्को हप्तासम्म मत दिन पाइने छ । लगभग १५ घण्टा मत दिने अवधीलाई बढाएर हप्ताभर मत दिनको लागि आव्हान हुनेछ । असोज ६ गते कतारको दोहाबाट नेपाल आइडल सहित पहिलो रनर अप र दोस्रो रनर अप घोषणा गरिने छ ।
ट्याग्स: nepal idol
क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकाका मेयरलाई कोरोना संक्रमण
बैतडीमा जिप दुर्घटना हुँदा २ जना घाइते
मनमैजुमा छुरा प्रहार गरी फरार भएका शेर्पा पक्राउ
लिदी पहिरो : मृतकको संख्या १३ पुग्यो, बेपत्ता २६ को खोजी जारी
उपत्यकामा ९८ सहित आज ४६८ जनामा कोरोना संक्रमण
भारतमा एकैदिन ५७ हजार संक्रमित उपचारपछि डिस्चार्ज
थप १ कोरोना संक्रमितको मृत्यु
नेकपा कार्यदलको बैठक बस्दै
The world now knows Cannon Hinnant as the North Carolina 5-year-old who was fatally shot while riding his bike less thanaweek ago. But to family, he was so much more: A child who will be remembered for his humor, energy and love. "He was very full of ...
Minnesota health officials warn of toxic hand sanitizer ingredients
Federal health officials want to know whether hand sanitizers used by millions of Americans are as effective at fighting germs as manufacturers claim, and whether there are any health risks to their use. Alex Jokich Updated: August 14, 2020 08:34 PM
Is it safe to send kids to school or daycare? Health experts weigh in
There's one big question for every family with children: How can we safely return to school duringapandemic? There's stillalot to learn about how the coronavirus can affect children, how they transmit it — and what impact that will have on teachers, school ...
NASCAR Betting: Cup Series heads to Daytona for first road course race of the season
You don't have to pay close attention to realize that Kevin Harvick is in the midst of an absolutely remarkable season. All you have to do is look at the results. The NASCAR Cup Series point leader had an opportunity to extend an already impressive streak of ...
Browns wide receiver Jarvis Landry makes plays while making his way back from offseason surgery
BEREA, Ohio -- Browns wide receiver Jarvis Landry was coy prior to taking the field on Friday when asked about what he would do at practice and what he would do for Monday's first padded practice. “As we move more toward team periods, offense versus ...